Ubuhlobo obonwabileyo lunceda ukulawula uxinzelelo | Umvuzo weZiseko
Ikhaya impilo istres
Ukujonga ngokukhawuleza koxinzelelo, jonga oku yokuzonwabisa.
Uxinzelelo olunzulu luphawu lwesilumkiso somzimba olusinceda siphendule ukwesatshiswa kwexesha elifutshane okanye utshintsho kwimeko yethu. Yindlela yokuphila ephambili. Njengempendulo yomzimba, ivuselela amandla ethu ngokulindeleka kwezenzo, ezifana nokuhamba okanye ukulwa. Iyakwazi ukuphulwa zibe ziimpendulo ezine: ukwesaba (ukuvusa), ukundiza (ukuphepha ukulimala okubonakalayo kudla ngokuba yimpendulo ekhethiweyo yokulwa); ukulwa (ejongene nomonakalo) kunye nokuqhwala (ukudlala efile kunye nethemba lebhere / usongelo oluqhubekayo). Ezi zigaba ziyakwenza isicelo nakwiintsuku zemihla ngemihla.
Xa sisempilweni, sinamandla okujongana nexesha elifutshane okanye uxinzelelo olunzima, umzekelo, ukuqhuba ukubamba ibhasi. Inqanaba lentliziyo yethu lenyuka, izinga lethu leswekile legazi liguquka, ukukhukhumeza kwethu kukunyuka ukunceda ukupholisa umzimba njengoko sihamba. Ezi mpendulo zibangelwa yi-hormone yoxinzelelo, adrenaline kwaye cortisol. Xa siqala ukuvusa, tshela, ngokubona ibhasi yethu ngaphambi kokuba sifinyelele esitobhini sebhasi, sivelisa i-adrenaline kunye ne-noradrenaline (amagama aseMerika aphepheniphrine kunye ne-norepinephrine) imizuzu embalwa ukuze asincede ukuba sifike khona ngexesha. Xa uxinzelelo luphelile (i-whew! Siyenzile) umzimba wethu uhlawule ngokukhawuleza, ukulinganisela kubuyiselwe.
Ukuba uxinzelelo luyaqhubeka, umzekelo, silahlekelwa ibhasi kwaye sisengozini yokukhawuleza kwintlanganiso ebalulekileyo okanye umhla, kubalulekile ukuba i-cortisol ye-neurochemical igwebe ukugcina amanqanaba ombane ephakamileyo okwaneleyo ukujongana noxinzelelo oluqhubekayo. I-Cortisol ivuselela amandla kwiindawo ezigcinwe kwisibindi kunye nezihlunu ukusinceda 'silwe' okanye 'sibaleke'. Ingxaki inokuthi iqhubeke igxotha kwinkqubo kakuhle emva kokuba uxinzelelo luye lwadlula.
I-Cortisol iyaqhubeka nokukhukula inkqubo yethu ukuba sinokubangela uxinzelelo oluninzi ebomini bethu. Namhlanje abaxinzelelo bavame ukuba yingqondo, ukuxhalaba malunga nokuhlala kwintlalo, ukunyaniseka kwentsapho, impumelelo yezoqoqosho okanye ukunyanelwa, kunokuba zizesongelo ezisemzimbeni ezifana nezizwe ezilwa nemfazwe. Umzimba wethu uyasabela kwiisongelo zengqondo ngendlela efanayo njengoko izidumbu zethu zakwabadala zenza ezo zinto ezisongelayo.
Njengomntu esetyenziselwa / ukuxoshwa kumanqanaba athile eemifanekiso ezothusayo kwiisayithi zoononopopasho, zidinga ukuvusa ngaphezulu, imifanekiso emangalisa ngakumbi ukuba iphakame. Ukuxhalabisa kwandisa ukuvuswa kwesondo okubandakanya ukunyuka okukhulu kwe-dopamine. Amanqanaba aphezulu e-cortisol kwinkqubo ngummakishi we-biological ngenxa yokungakhathazeki nje kuphela, kodwa nokuxinezeleka.
Ingcinezelo inokuqokelela ngaphantsi kwe-awareness yethu. Ngokukhawuleza sinokuziva sizixakeke ngobomi size sizive singakwazi ukuhlangabezana nazo. Asinakho ukuzimisela kwiingxabano okanye iingxaki. Ingqondo egxininisekile incike kumkhwa. Ukucinga kokudala kunzima. Uxinzelelo oluninzi, ixesha elide kakhulu, lugxininiso olungapheliyo. Yilapho umzimba wethu ungakwazi ukubuyisela kwakhona njengoko uyenzayo ngokunyamezela okukhulu. Yiyonto esithwalayo, iyanciphisa isimiso sethu sokuzivikela, sisenza sibe sengozi ngakumbi kwiingozi kwaye sisenza sive sisicindezelekile, sinoxhala kwaye singekho phantsi kolawulo. Ngethuba xa sisengozini yokuthatha ezinye izikhuthazo, iziyobisi okanye utywala, kunye nokuqhutyelwa kwe-intanethi eyingozi kakhulu ukuze sikwazi ukuziva ngcono kwaye siphephe intlungu.
Ukusetyenziswa okungapheliyo kwe-intanethi ye-intanethi kubeka uxinzelelo olukhulu kumandla omzimba agcinwe kwaye kukhokelela kuzo zonke iintlobo zeengxaki zomzimba nezengqondo. I-HPA Axis Dysregulation kwiMadoda ene-Hypersexual Disorder (2015) -Uphononongo olunamadoda angama-67 angamakhoboka ezesondo kunye nolawulo oluhambelana neminyaka engama-39. Ihypothalamus-Pituitary-Adrenal (HPA) axis yeyona ndawo iphambili kwimpendulo yoxinzelelo. Iziyobisi ukuguqula izijikelezo zengqondo ekhokelela kwi-axis yeHPA engasebenzi. Olu pho nonongo lwezilonda (i-hypersexuals) lifumene iimpendulo zengcinezelo ezijonge iziphumo kunye nezilingo zomzimba.
Indlela esinokulawula ngayo uxinzelelo kwiminyaka ibalulekileyo ekusebenzeni kwethu kunye nobudlelwane bethu. Njengoko sibonile ukusuka Ukunika isibonelelo, umlutha, ukuxinezeleka kunye neurosisisithi ziyithintelo enkulu kwiimeko ezinobomi kunye nolonwabo.
Ukuxininisa kugxininisa ukugxilwa komzimba kunye nokunikezelwa kwamandla kwiinkalo eziphambili ezifana nobuchopho, inkqubo yokugaya ukutya kunye nezitho zokuzala ukwenzela ukondla amandla kule mimandla idinga amandla ngokukhawuleza ukuze sikhuphe ingozi. Yingakho emva kwexesha, ngaphandle kokuba siphephe uxinzelelo lwethu ngokufanelekileyo, kwaye ingcinezelo ingenakugwema, sihlakulela imeko yokugaya njenge-syndrome, okanye imemori embi kunye nokungakwazi ukugxininisa ixesha elide. Sinciphisa amandla ethu omzimba, sithatha izifo ngokulula kwaye sithatha ixesha elide ukuphilisa. Ukugxininisa kubakho isikhumba nomzimba.
Ngaphantsi koxinzelelo olungapheliyo, i-adrenaline idala izibazi emithanjeni yegazi enokubangela ukuhlaselwa yintliziyo okanye ukubetha, kunye ne-cortisol yonakalisa iiseli ze-hippocampus, ikhubaza amandla ethu okufunda nokukhumbula.
Ngomnye, uhlobo olubi kakhulu loxinzelelo kukuba asikwazi ukulawula ingxaki, ukuba asinakunceda.
Ngamafutshane, uxinzelelo lusithwala.
<< Iziphumo zomzimba Ukhuthazo olungaphaya kwamandla >>